Interpol oo Gacanta ku dhigay nin Kenyan oo ka Ganacsan Jiray Feenta Maroodiga - iftineducation.com
iftineducation.com – Hay’ad Kenyan ah oo aan dowli ahayn kana shaqeysa howlaha xanaanada duur joogta ayaa sheegtay in ay booliska aduunka ee Interpol gacan ku siisay soo qabashada Faysal Maxamed oo ganacsade Kenyanka ah kaasoo dhoofin jiray foolasha maroodiga.
Booliska aduunka ee Interpol ayaa bishii hore Faysay ku daray liiska dadka dadka loogu doonis badan yahay dunida qabashadooda waxayna soo bandhigeen Sawirkiisa iyo xogtiisa oo dhameystiran website yada waxa ayna madaxiisa dul dhigtay lacago fara badan, Faysal ayaa Todobaadkii hore waxa lagu qabty magaalada Magaalada Darisalam ee Wadanka Tanzania.
War bixin qoraal ah oo ay soo saareen gudoomiyaha hay’adaan ahna maareeyaha guud Philip Murgor ayuu ku sheegay in xariga ninkaasi uu yahay mid qeyb ka ah guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka ah ugaarsatada sharci darada ah.
Murgor ayaa sheegay in hay’adooda oo lagu magacaabo Wildlife Direct ay in mudo ah ku raad joogeen Feisal ayna u kuur galayeen kiis ku saabsan foolal maroodi oo la qabtay bishii June.
Mr Murgor ayaa xariga Feisal uga mahad celiyay wasaarada deegaanka ee dalka Kenya, waaxda ilaalada duur joogta, booliska Kenya, kuwa Tanzania iyo booliska aduunka ee Interpol.
Iran oo doolatus Milatari ku tijaabisay diyaarad ismiidaamin aan duuliye laheyn